दी ग्रेट गेट्सबी : विश्वकै दुःखान्त मानवीय दुर्दशाको प्रतिनिधि कृति (पुस्तक चर्चा) | चितवन पोष्ट
दी ग्रेट गेट्सबी : विश्वकै दुःखान्त मानवीय दुर्दशाको प्रतिनिधि कृति (पुस्तक चर्चा)
‘ज्याज एज’ र ‘अमेरिकन ड्रिमका’ उन्नायक उपन्यासकार फ्रान्सिस स्कट फिजराल्डले तीन सय हजार पिस ‘दी ग्रेट गेट्सबी’ किताब बिनाविज्ञापन प्रतिवर्ष बिक्री गर्दथे । यसरी लाखौँ संख्यामा बिक्री भएको कारण तत्कालीन अमेरिकन समाजको जीवन्त फोटो थियो यो उपन्यास । स्वयम् उपन्यासकार फिजराल्डकी आफ्नै श्रीमती न्यायाधीशकी छोरी जेल्डा निकै राम्रो लेखिका र अति उत्तम पेन्टर थिइन्, जसलाई उनको लेखरचनाहरुबाटै प्रभाव पारेर गहिरो प्रेम र विवाह भएको थियो सन् १९१८ मा । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, उनको विवाहपश्चात् सिर्जना गरिएको यो उपन्यासको बौद्धिक स्तर कति छ भन्ने कुरा । समालोचक ए. ई. डाइसनको टिप्पणी छ– ‘यो विश्वकै साहित्य हो, यसले केवल अमेरिकन समस्यामात्र नभएर समग्र दुःखान्त मानवीय दुर्दशालाई दर्शाउँछ ।’ फिजराल्ड आफैँ रोमान्टिक र दुःखान्त व्यक्तित्व थिए ।
फिजराल्डको जन्म धनी, उच्च मध्यम वर्गका व्यापारीको छोराको रुपमा भए तापनि पारिवारिक आर्थिक समस्यमा परेको हुँदा अधिकांश पात्रहरुमार्फत आर्थिक लालच उन्मुख चरित्र हाबी देखाइनु स्वाभाविक छ । सबै खालका राग तथा क्षोभ र सयलवादी छिनाझम्टी पात्रहरुको प्रवृत्ति देखिनु स्वादिलो परिवेश नै हो । भौतिकवादी भ्रम र वास्तविकताबीच द्वन्द्वको नाटकीकरण उपन्यासको विषय सुहाउँदो छ ।
विशेष गरेर प्रथम विश्वयुद्धपछिको तत्कालीन आधुनिक अमेरिकन समाज अमेरिकन ड्रिम, ज्याज युग अनि लस्ट जेनेरेसन स्वरुपीय धरातलमा थियो । त्यसो त, सन् १९२० को दशकको अन्त्य अर्थात् सन् १९२९ आर्थिक मन्दीको चपेटामा थियो । आर्थिक मन्दीको पिल्सावटले अमेरिकनहरुमा आर्थिक उपलब्धिसँगै मटेरियल समृद्धिको तीव्र चाहना बढेको थियो ।
सन् १९७६ मा बेलायतविरूद्ध राजनीतिकरुपमा विद्रोह गरेको अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले पूर्णरुपमा स्वतन्त्र पहिचान दिलाउन सफल भएपछि उठेको अमेरिकन ड्रिमको अवधारणा सर्वत्र हाबी थियो । सबै अमेरिकीहरु समान जीवन, स्वतन्त्रता र आनन्द वा खुसीको खोजीमा थोमस जेफर्सनीय धारणाले अघि बढ्दै थिए । त्यससँगसँगै सबै काममा व्यस्त रहने, सबैले प्रशस्त पैसा आर्जन गर्ने, धनसम्पत्ति जोड्ने, भौतिक सुखसुविधाले सम्पन्न जीवन जिउने, उच्च ओहोदा कायम गर्ने र सर्वमान्य बन्ने उद्देश्य लिएको अमेरिकन ड्रिमको लिगमा त्यो समाज थियो ।
अर्कोतर्फ, प्रथम विश्वयुद्धपश्चात्को अमेरिकन जिन्दगी नयाँ ढंगको फेरबदलले रंगियो । जसरी विश्वयुद्धहरुले शक्तिकेन्द्रलाई तितरबितर बनायो, पुरानो भौतिक संरचना ध्वस्त ग¥यो, अरबौँ धनजन सखाप पा¥यो र पूरै उथलपुथल ल्यायो, त्यसैगरी अमेरिकन समाज पुरानो सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, संस्कृति र आर्थिक अवस्थालाई ध्वस्त पारेर नयाँरुपमा अगाडि बढ्दै थियो । पुरानो स्थापित समाज भत्केर नयाँ बन्दै थियो । अर्धआधुनिक समाजसँगै तितरबितर भएका लेखक, कलाकार, जनशक्ति तथा अन्य क्षमताका मान्छेहरु पुनः संगठित भई लागेका थिए । चरम सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र भौतिक विकासको फेरोमा आधुनिक÷अत्याधुनिक भौतिक वस्तुहरुको तृष्णामा समाज डुब्दै थियो । युवापुस्ताहरुमा मनोरञ्जन तथा सयलको चरम उपयोग जाग्दै थियो । दैनिक पार्टी, भोज, उत्सव, कन्सर्ट तथा म्युजिकको आनन्दित स्वादमा नयाँ पिँढी रमाउन व्यस्त थिए । प्रेम र सेक्सको चर्तिकला उत्पात थियो । ‘दी ग्रेट गेट्सबी’े तिनै स्वरुपहरुको धरातलको गर्भबाट जन्मिएको कृति हो ।
तत्कालीन अमेरिकी समाजमा विद्यमान सर्वपक्षीय चरित्र र स्वरुपलाई सर्लक्कै फोटोकपी गर्न सफल उपन्यास ‘दी ग्रेट गेट्सबी’ सिर्जनशील र नवीन तर जटिल ढाँचाको थियो भन्ने कुरा स्वयम् उपन्यासकार फ्रान्सिस स्कट फिजराल्डले प्रकाशकलाई ‘आई मस्ट ट्राइ टु राइट समथिङ न्यू, समथिङ एक्स्ट्रा अर्डिनरी एण्ड ब्युटीफुल, सिम्पल एण्ड इन्ट्रिकेट्ली प्याटन्र्ड” भनेको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ । अहिलेसम्मै लेखिएकोमध्ये सर्वोत्कृष्ट उपन्यास हो भन्ने दाबी पनि उनै फिजराल्डको थियो ।
पात्रको हिसाबले प्रमुख र सहायक गरी लगभग बीस संख्यामा रहेको यो उपन्यासमा सम्पूर्ण प्रवृत्ति भेटिन्छ । निक क्यारावे, जे. गेट्सबी, टम बुचानन र डेजीको भूमिका नै प्रमुख पात्रको देखाइएको छ भने जर्ज विल्सन, मिर्टल विल्सन, दान कोडी, जोर्डन बेकर, मेयर वल्फसिम आदि सहायक पात्रहरुमध्येका मह¤वपूर्ण हुन् ।
अमेरिकन ड्रिमको लगावमा हुत्तिएका ती पात्रहरु ज्याज युगीन चरित्रको चरम अभ्यासमा रङमगिएको देखिन्छ ।
कथावस्तुको सेटिङ र प्लटिङमा नौ भागमा विभाजित यस चर्चित उपन्यासमा मिड वेस्ट, वेस्ट एग, इस्ट एग, लङ आईल्यान्ड, न्यूयोर्क र भ्याली अफ आसेसलाई नै जोडदार मह¤व दिइएको छ । प्रथम व्यक्ति कथन शैलीमा लेखिएको यो उपन्यासको प्रमुख पात्र, कथक र निरीक्षकको समेत भूमिका पक्रेका निक क्यारावे सम्पूर्ण घटनाको वृत्तान्तमात्र कहँदैनन् कि सबै पात्रहरुका गतिविधि, क्रियाकलाप, व्यवहार, धारणा र प्रवृत्तिको समेत सूक्ष्म निरीक्षण गर्दछन् । यद्यपि, कमेन्ट त्यति धेरै पोख्दैनन् ।
कथक निकको परिचयात्मक पृष्ठभूमिबाट सुरू भई उनको माइग्रेसन मिड वेस्टबाट भएर वेस्ट एगमा धितो व्यापार सुरू गरेको प्रथम भाग उनकी भतिजी डेजी र श्रीमान् टम बुचाननको इस्ट एगमा अवस्थित घरमा डिनर खाने घटनामा केन्द्रित छ । त्यो अवसर नै निक क्यारावेको जोर्डन बेकरसँगको भेट र परिचयका साथै प्रेमको ढोका खुलेको अवसर हो । निकले गेट्सबीलाई देख्नेमात्र काम हुन्छ । दोस्रो भागले खरानीको उपत्यका (भ्याली अफ आसेस)लाई निकमार्फत बयान गराउने प्लटिङ समेटेको छ । जहाँ धनाढ्य पात्र टमले आफ्नी प्रेमिका मिर्टल विल्सन (ग्यास कम्पनीकी मालिक्नी)लाई निकसँग परिचय गराउँछ । पार्टी खाँदा कारणवश टमले प्रेमिका मिर्टलको नाक फुटाइदिएको पनि छ ।
तेस्रो भागमा गेट्सबीको भव्य पार्टीको आयोजना हुन्छ, जहाँ सबै नानाथरीका सरिक हुन्छन् र निक क्यारावेसँग परिचय पनि त्यहीँ हुन्छ । निक र जोर्डन बेकरको प्रेमको डोरी बाटिन पुग्छ । निक र गेट्सबीको राम्ररी कुराकानी चौँथो भागले गराउँछ । गेट्सबीले निकलाई आफ्नो अतीतका बारेमा वर्णन गर्छ । डेजीसँगको प्रेम वियोगको पीडा गेट्सबीले निकलाई पोख्नेमात्र होइन निकलाई चिया पार्टीको होस्ट बनेर डेजीसँग उसको पुनर्मिलन हुने व्यवस्थाको अनुरोध गर्छन् । गेट्स्बीको आर्मी जागिरको विषय र डेजीसँग प्रेममा फसेको कुरा जोर्डनले खोलिदिन्छ ।
भाग पाँचमा गेट्सबी र डेजीको पुनर्मिलन समेटिएको छ । गेट्सबीले डेजीलाई प्रभाव पार्न हदैसम्मको प्रयासको क्रममा उनले बुर्जुवा, पुँजीवादी र देखावटी शैलीको प्रयोग गर्छन् । उनले आफ्नो घर, कोठा, भौतिक सामानहरु, महँगा लत्ताकपडा सबैको प्रदर्शनी डेजीको आत्मा जित्ने हतियारका रुपमा गर्छन् । पाहुनालाई म्युजिकको आनन्द दिएर आकर्षण गर्न क्लिपस्प्रिङगरको भूमिका अघि सर्छ । भाग ६ मा निकले गेट्सबीको पूर्वइतिहास र वास्तविक परिचयको वृत्तान्त बताउँछन् । उनको वास्तविक नाम, उनी घर छोडेर हिँडेको र दन कोडी भन्ने समुद्री जहाजको मालिक अरबपतिले लगेर पानीजहाजमा यात्रा गराउँदै पाँच वर्षसम्म पालेर शिक्षादीक्षा दिएको प्रसंग उल्लेख छ । गेट्सबीको डेजीसँगको गुमेको प्रेमको चिन्ता र त्यसलाई फेरि प्राप्त गर्ने प्रयास छ । तर, उनी त्यति सफल हुँदैनन् भन्ने सन्दर्भको बिसौनी छैटौँ भाग हो ।
अन्य सबै भागको तुलनामा सबैभन्दा लामो सातौँ भाग घटना÷परिघटनाको हिसाबले पनि निकै ओझिलो मान्न सकिन्छ । उपन्यासलाई विशिष्ट बनाउन सार्थक घटना यसैमा भेटिन्छ । गेट्सबी र टम बुचाननको डेजीसँगको आन्तरिक विषयको उद्घाटन, न्यूयोर्क होटलमा पार्टी गर्न गएको, डेजीले श्रीमान् टमलाई छोडेर प्रेमी गेट्सबीको कारमा गएको प्रेम विद्रोह, मिर्टलसँगको टमको प्रेममा मिर्टलको श्रीमान् जर्ज विल्सनद्वारा धक्का, टम बुचाननले प्रेमिका मिर्टल र आफ्नै श्रीमती डेजीको माया गुमेको अनुभूति आदि यस भागभित्र छन् ।
न्यूयोर्कको होटलमा अत्यधिक मदिरा पिएपछि उनीहरुबीच रिसराग बढ्दै जाँदा झगडा र हानाहानको परिस्थिति बन्यो । डेजीलाई गेट्सबीद्वारा प्रेमको अग्निपरीक्षा हुँदा डेजीले टम बुचाननप्रति माया छैन भन्न नसक्दा गेट्सबीको भावनामा ठूलो चोटसँगै न्यूयोर्कबाट फर्कने योजना बनेको छ ।
न्यूयोर्कबाट फर्कंदा गेट्सबी र टमले आआफ्नै गाडी चलाएकै कारण मिर्टलको दुर्घटनामा मृत्युको घटनाले जर्ज विल्सनलाई थोरै भ्रम सिर्जना गरेको छ । गेट्सबीको कार डेजीले चलाउँदा मिर्टललाई ठक्कर दिएर मृत्यु हुन जान्छ र पछि यही निर्दोष गेट्सबीको जर्जद्वारा हत्याको कारण बन्छ ।
आठौँ अध्यायले अझ क्लाइमेक्सतर्फ घटनालाई चढाएको छ । डेजीले कार दुर्घटनामार्फत मिर्टलको हत्या गरिसकेपछि उनमा इमानदारिताको खडेरीले गर्दा आपराधिक दोषको भागीदार निर्दोष गेट्सबी हुने परिबन्ध छ । श्रीमती मिर्टलको दुर्घटनामा मृत्युले भावविभोर भएर छटपटाएको जर्ज विल्सन कारवाला हत्याराको खोजीमा टमकहाँ पुग्दा उसले विश्वासघात र बेइमानीको पराकाष्ठा प्रदर्शन गर्दै गेट्सबीले मारेको आरोपसहित ठेगाना बताइदिन्छ । जसले गर्दा जर्ज विल्सनले घरको पोखरीमा पौडी खेल्दै गरेको गेट्सबीलाई गोली हानी मार्छ र आफू पनि आत्महत्या गर्छ त्यही गोलीबाट । यस मानेमा अध्याय सात र आठ उपन्यासकै केन्द्रीय भाग मान्न सकिन्छ ।
अध्याय नौ अन्तिम अध्यायको रुपमा सिर्जित छ । गेट्सबीको दाहसंस्कारको कार्यक्रम, खाने–पिउने पार्टीमा सम्पूर्ण सहभागीहरुको नियत परीक्षण, टम र डेजी बुचाननको स्वार्थको अतिवादी व्यवहार र निक क्यारावेको गेट्सबीप्रतिको इमानदारिता र नैतिकता, निस्वार्थता, परिपक्वता तथा व्यावहारिकताको प्रदर्शनजस्ता मह¤वपूर्ण पक्षको संलग्नताले अन्तिम अध्याय अर्थपूर्णरुपमा खडा छ ।
सन् १९२० को दशकमा बिमारीले थलिएको अमेरिका पहिलो विश्वयुद्धको चपेटामा परेर घुत्रुक्कै भएको अमेरिका पुनः अमेरिकन ड्रिमको नयाँ उत्साह, उमंग र मह¤वाकांक्षाले ओतप्रोत हुँदै अघि बढ्दै थियो । तत्कालीन बिमारी अमेरिकाको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दर्पण प्रतिबिम्बित गर्न जीवन्त उपन्यास ‘दी ग्रेट गेट्सबी’ फ्रान्सिस स्कट फिजराल्डको कला, कौशल, सिर्जनशीलता र बौद्धिकताको चमत्कार मान्न सकिन्छ । बिमारीले थलिएपछि भोकले खौलिएझैँ प्रथम विश्वयुद्धले थलिएर तङ्ग्रिएको अमेरिकन समाज ‘अमेरिकन ड्रिम’को तीक्ष्ण भोगको रफ्तारमा हुइँकिएको र सोही ड्रिमको भ्रष्टाचारमा डुबेको पुष्टि गर्ने उद्देश्य उपन्यासको देखिन्छ । वास्तवमा ‘अमेरिकन ड्रिम’ ‘ज्याज युग’ र ‘लस्ट जेनेरेसन’को अतिवादी अभ्यासको आधार हो । आधुनिक अमेरिकन समाजमा व्याप्त बुर्जुवा चरित्र, पुँजीवादी अराजकता, यौन विकृति, भौतिक विलासी जीवनको चरम अवस्था, आर्थिक तथा नैतिक भ्रष्टता, आध्यात्मिक तथा धार्मिक नष्टता र चारित्रिक जटिलताको कन्टेनर ‘अमेरिकन ड्रीम’ हो भन्दा प्रतिवाद हुन सक्दैन ।
यिनै ज्याज युगीन जटिलताको पराकाष्ठालाई भारी हाल्दै सिर्जित उपन्यास ‘दी ग्रेट गेट्सबी’ तत्कालीन अमेरिकन फोटोकपीका रुपमा प्रतिबिम्बन गर्न खडा छ । असल चरित्र, दुर्लभ तथा अपवाद र खराब चरित्रको बिगबिगी देखाइएको यो प्रख्यात उपन्यासमा निक कारावे, गेट्सबी, टम बुचानन, डेजीलाई अति मह¤वपूर्ण पात्र र जर्ज विल्सन, मिर्टल विल्सन, जोर्डन वेकर, दन कोडी, मेयर वल्फ्सिम आदिलाई मह¤वपूर्ण पात्रका रुपमा जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यसो त, सम्पूर्ण पात्र र प्रवृत्ति बटुलिने गरी अन्य झन्डै एक दर्जन बढी पात्रहरु सहायक भूमिकामा ल्याइएको छ । उपन्यासमा सेटिङ र प्लटिङ भएका नौवटा अध्यायसम्मका घटनाहरुका कथक अर्थात् वृत्तान्तकार निक करावे प्रमुख पात्रमात्र होइनन्, उनले निरीक्षकको भूमिका वहन गरेका छन् । उपन्यासको धुरी पात्र गेट्सबीबाहेक एउटा मात्र असल, सकारात्मक र सद्गुणी पात्र निक करावेलाई उपन्यासकार फिजराल्डको प्रतिनिधि पात्र मान्न सकिन्छ । कथाको प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्म पूराका पूरा घटनामा संलग्न निकले सबै घटनाको बेलीविस्तार त लगाउँछन् नै, साथै घटनामा समाहित सम्पूर्ण पात्रहरुका क्रियाकलाप, गतिविधि, व्यवहार, प्रवृत्ति र चरित्रको कुशल तथा परिपक्व निरीक्षण गरी कमेन्ट गर्दछन् । उनलाई यो जिम्मेवारी अति नै सुहाएको छ, किनकि उनमा कुनै चारित्रिक, नैतिक, आर्थिक, भौतिक र व्यैयक्तिक कमजोरी देखिँदैन ।
टम, डेजी बुचानन, गेट्सबी र अन्यभन्दा गरिब निक धितो व्यापारको सञ्चालकका रुपमा भाडामै जीविकोपार्जन गर्छन् । उनी लोभी, पापी, भ्रष्ट, अनैतिक र चरित्रहीन सबै पात्रहरुका लागि असल पाठ सिक्न लायक गुरू हुन् भन्दा हुन्छ । न त पार्टीहरुमा रक्सी पिएर झल्लिएको पाइन्छ, न त चरित्र गुमाएका नै छन् उनले, न त भौतिक लालच नै राखेका छन् । अधर्मी, पाखण्डी, धूर्त, लोभी, पापी, बेइमानी, स्वार्थी र अमेरिकन ड्रिमको भ्रष्ट पात्रहरुको भीडमा अडिग चरित्रका रूपमा खडा हुनु असामान्य र अपवाद हुन् निक करावे ।
दुःखान्त हिरो गेट्सबीसँगै उनलाई हिरोको मान्यता दिँदा न्याय हुन्छ । भौतिक जीवनको अतिभोगी टम–डेजी बुचानन, दन कडी, मेयर विल्फ्सिम आदिको संगतका बाबजुद पनि गेट्सबीको जीवन–मरणसम्मका दिनहरुमा उनले अति इमानदार ढंगले धर्म निभाए । गेट्सबीलाई हरेक कुरामा साथ र सहयोग गर्ने निक गेट्सबीले जर्ज विल्सनद्वारा हत्यापछिको दाहसंस्कार कार्यक्रमसम्म धेरै जिम्मेवार असल मित्रको भूमिका निभाएर सबैलाई मृत्युको खबर गर्दै दाहसंस्कारमा उपस्थितिको सूचना दिएर व्यवस्था समेत मिलाउँछन् ।
गेट्सबीले आयोजना गरेको निरन्तरको विभिन्न पार्टीमा चिनेका र नचिनेका हजारौँ मान्छे जम्मा भए । खानपान र रंग–रमाइलोको मस्ती लिए, तर गेट्सबीकै दाहसंस्कार कार्यक्रममा ओल्फ आई, बुबा हेनरी गेज, हुलाकी र नोकरबाहेक कोही समावेश नहुनु स्वार्थी पुँजीवादी सामाजिक चरित्रको पराकाष्ठा हो । स्वयम् गेट्सबीकी प्रेमिका डेजीले समेत समवेदना र एउटा फूलसमेत नचढाउनु आश्चर्यजनक छ । टम बुचानन त झन् साथीको हैसियत नै बिर्सेर गेट्सबीको मृत्युमा आनन्द मानेर अमानवीयताको उदांगो नमुना बनेका छन् ।
उपन्यासको अर्को जोडबल महिला चरित्र, पुँजीवादी भौतिक प्रेम र कमजोरीको पर्दाफासमा छ । निक क्यारावेको प्रेमिका जोर्डन बेकरको धुत्र्याइँ, जालझेल र षड्यन्त्रले आफैँमा व्यंग्य गरेको छ । डेजीको धनसम्पतिप्रतिको मोहले गर्दा आफ्नो प्रेमी गेट्सबीलाई छोडेर धनी टमसँग बिहे गर्नुले प्रेमको नौटंकी कति हुँदोरहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । गेट्सबीसँग एक वर्ष प्रेमपश्चात् टमसँग पोइल गए पनि पुनः गेट्सबीसँग सम्पर्कमा आएर प्रेमको नौटंकी गरेको रहेछ भन्ने कुरा टम र गेट्सबीका बीच डेजीले खुलेर भन्न नसकेकोबाट थाहा हुन्छ । त्यसो त, आफ्नो श्रीमान् जर्ज हुँदाहुँदै टमसँग प्रेम गर्ने मिर्टल विल्सनले श्रीमान्को आलोचनामा आनन्द मान्नु र अति अश्लील ढंगले प्रस्तुत हुनु आधुनिक छाडा महिलाको द्योतक हो । त्यसो त, टम बुचाननको चरित्र पुरूषकै बेइज्जत प्रतिनिधित्व हो । अति भौतिक समृद्धि, उपभोग, धनसम्पत्ति र मानसम्मानको भोको टम कसैप्रति सिरियस छैनन् । धनसम्पत्तिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उनको मान्यता अति नै निन्दनीय छ ।
बुर्जुवा समाजमा कति गतिछाडा, निर्लज्जता र हाकाहाकी उत्ताउलोपनको प्रस्तुति हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन् यी । आफ्नो श्रीमती मिर्टल विल्सनको टम बुचाननसँग प्रेम भएको थाहा पाउँदा पनि त्याग्न नसक्ने बरू कोठामा थुनेर राख्ने जर्ज विल्सनमा आत्मगत कमजोरीको पराकाष्ठा भेटिन्छ । यद्यपि, उनले श्रीमती मिर्टलप्रति प्रेमभाव भने गहिरो राखेको हुन सक्छन् । त्यसको चुनौतीमा मिर्टल श्रीमान्को थुनाइको बन्धनबाट उम्केर प्रेमी टम बुचाननको गाडीतर्फ अघि बढ्नुले टमप्रति उनको प्रेम समर्पण मान्न सकिन्छ । टम, डेजी र गेट्सबीद्वारा आयोजित विभिन्न पार्टीहरुमा सरिक भई रक्सी पिएर असन्तुलित भई अवाञ्छित क्रियाकलाप देखाउने महिलाहरुले आधुनिक छाडा संस्कृतिको प्रतिबिम्ब दिन्छन् ।
गेट्सबीको दुःखान्त हिरोइजम
उपन्यासकार स्कट फिजराल्डले गेट्सबीलाई केही कमजोरीका बाबजुद हिरोका रुपमा उभ्याएका छन् । आर्मीको जागिरमार्फत राष्ट्रसेवामा लागेका गेट्सबी राष्ट्रसेवकको हैसियतमा र लुइभिलबाट डेजी प्रेमिकालाई छोडेर समुद्र पार सरूवा हुँदा सहानुभूति पाउने ठाउँ छ । उनको असल पक्ष चरित्रमा देखिन्छ, जब कि उनले डेजीबाहेक अन्य केटीलाई प्रेम गरेका छ्रैनन् । उनकी प्रेमिका डेजी टम बुचाननसँग पोइल गएपछि पनि निक क्यारावे, जोर्डन बेकर आदि मार्फत पुनर्मिलन गराइमाग्नु डेजीप्रतिकै सच्चा प्रेम हो । त्यतिमात्र होइन, गेट्सबीले तमाम पार्टीको आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य डेजीको प्रेमलाई पुनः प्राप्त गर्नु नै हो । उनी डेजीप्रति निकै चिन्तित हुनु भावनात्मक प्रेमको जिकिर हो । यद्यपि, डेजीले भने उनलाई प्रेमको खेलमा भुलाएको देखिन्छ ।
गेट्सबी निकै सिर्जनशील, ट्यालेन्ट र विचारशील देखिन्छन् । प्रेमको मामला सफल बनाउनका निम्ति उनको चतु¥याइँ र योजनाहरुले यसलाई पुष्टि गर्दछन् । डेजीसँगको यही प्रेमको खेल नै उनको जीवनको अभिशाप बन्दछ । उनले धेरै भोज पार्टीहरुको आयोजना गर्नु र ठूलो धनराशि खर्च गर्नुले फजुल खर्चालुका रुपमा टिप्पणी गर्न मिल्दछ । यस मामलामा निक करावेको साथ र सहयोग उनका लागि सकारात्मक पक्ष थियो ।
गेट्सबी पनि आधुनिक बुर्जुवा पुँजीवादी ढर्रा र अमेरिकन ड्रिमको सिकार भएका छन् । यसको दूषित हावाको र दूषित जमिनको प्रभाव उनमा पर्नु स्वाभाविक थियो जसले गर्दा उनी देखावटी, तडकभडक, हाईफाई र भौतिक सम्पन्नताको लालची प्रवृत्तिबाट निष्प्रभावित हुन सकेनन् । डेजीलाई आफ्नो घर, कोठा, आधुनिक सामग्री, महँगा कपडाहरु आदि देखाएर प्रभावमा लिनु सोही प्रवृत्तिको उपज हो । यही भौतिक सांसारिक आनन्दको भ्रममार्फत उनी रोमान्टिक लाइफमा व्यस्त छन् । यहाँनेर अमेरिकन ड्रिम आर्जनको क्रममा उनको कमजोरी भेटिन्छ । दन कडीजस्ता अरबपति पानीजहाज मालिकको पाँचवर्षे स्कुलिङबाट उनले धनसम्पत्तिकै समृद्धिको उपाय सिके । मेयर वल्फ्सिमजस्ता आपराधिक, ग्याङस्टार र स्वार्थी व्यक्तिको संगतले उनले भ्रष्ट ढंगले धन कमाएको पुष्टि हुन्छ ।
डेजीकै प्रेम विश्वासको खोजमा बुचाननहरुको संगत गर्नु, न्यूयोर्कतर्फ पार्टीका लागि यात्रा गर्नु र आफ्नो कार डेजीलाई चलाउन दिएर मिर्टलको दुर्घटना हुनु नै गेट्सबीको जीवनको दुर्दशा थियो । डेजीले नै प्रेमको नाममा खेलाउनु र डेजीले नै उनको कार दुर्घटना गराएर मिर्टलको हत्या गर्नु नै उनको मृत्युको मार्ग बन्यो । मिर्टलको हत्यारा दोषी डेजीलाई केही नगरी जर्ज विल्सन (मिर्टलका श्रीमान्)ले निर्दोष गेट्सबीलाई बदलास्वरुप गोली हानेर हत्या गर्नु गेट्सबीका निम्ति सबैभन्दा सहानुभूतिको क्षण हो । जब उनको जीवन समाप्त हुन्छ तब सँगसँगै अमेरिकन ड्रिम असफल हुन्छ । गेट्स्बीले न त डेजी श्रीमतीका रुपमा प्राप्त गरे, न त खुसी किन्न सके, न त उनले अमेरिकन ड्रिम नै खरिद गर्न सफल भए ! बरू आशाको कठिन यात्रामा संघर्ष गर्दागर्दै जीवनबाटै बिदा लिन प¥यो । यसर्थ, गेट्सबी असफल अमेरिकन ड्रिमको दुःखान्त हिरो भएका छन् । गेट्सबी मिथिकल पात्रको हैसियतमा स्थापित छन् । अमेरिकन रोमान्टिक हिरोको प्रतिनिधित्व गरेका छन् उनले ।
थोमस जेफर्सनको जीवनदर्शन, स्वतन्त्रता र आनन्दको खोजीको मार्गमा अमेरिकीलाई देखाइएको छ । नयाँ–नयाँ स्थानमा काम, पेसा, व्यापार र सुखको खोजीस्वरुप निक मिड वेस्ट जन्मस्थल छोडेर वेस्ट एगतर्फ गएका छन् । यद्यपि, उनी गेट्सबीको मृत्युपछि आफ्नै भूमि फर्किए । त्यस्तै, वस्ट एग र इष्ट एगवासीहरुको संस्कार र संस्कृतिमा पृथकता देखाइएको छ । वस्ट एग नवधनाढ्य र बुर्जुवाहरुको अवस्थित थलो अर्थात् नवविकसित सहर बनेको छ भने इष्ट एग पुरानो धनाढ्यहरुको बसोबास स्थल हो ।
उपन्यासकार फिजराल्डले ती बासिन्दा रहेको स्थललाई वेस्टल्यान्ड अर्थात् दूषित भूमिको संज्ञा दिएका छन् । आधुनिक धनाढ्यहरु भ्रष्ट, पतित, स्वार्थी, धूर्त, आपराधिक र निकृष्ट हुनाले वेस्टल्यान्ड संज्ञा सार्थक बन्न पुगेको छ । ठीक त्यही सार्थकतामा भ्याली अफ आसेस अर्थात् खरानीको उपत्यकाको संकेत गरिएको छ । यसको मतलब सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, कथित् सभ्यता र आधुनिकीकरण तथा भौतिक विकासले प्राकृतिक भूमि र सुन्दरताको पतन, आध्यात्मिक तथा धार्मिक पतन र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि भ्रष्टताको संगम छ । डा. एकलवर्गको आँखाको विज्ञापनले पैसा आर्जनको विज्ञापनले आक्रान्त सहर जनाउँछ । आखिर सबै चीजका शासक, रेगुलेटर र चाबी नै पुँजीवादी धनसम्पति हुँदोरहेछ । उपन्यासमा जति घटना, परिघटना, सुखान्त र दुखान्त कथाहरु छन्, ती सबै पुँजीवादकै शक्तिमा केन्द्रित छन् ।